Dispenser ye-Soap ezenzekelayo ye-othomathikhi
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Izipompo zeBlue Bath / WOWOW Zenzekelayo Isepha wekhadi Wall Mount
Ukunciphisa izinga losulelo lwe-COVID-19, kungekuphela nje kufuneka uhlambe izandla ngokukhutheleyo, kodwa kufuneka nesisasazi sensor esizenzekelayo sokucutha ithuba lokosuleleka sisifo
Ukuqhamka kwe-COVID-19 kwenziwa ukuba abantu banake ingqalelo kwingxaki yokuhlamba izandla. Abasasazi bepompo zesepha bendabuko kufuneka bachukumise intloko yompompo ngesandla, esonyusa ukubakho kosulelo yintsholongwane. Ingakumbi kwiindawo zikawonke-wonke ezinjenge makhaya, izikolo, iivenkile zokuthenga, iivenkile zokutyela, kunye nezikhululo, abantu abaninzi kufuneka baye kwindlu yangasese, ngeli xesha, izixhobo zokuhambisa isepha ezenzekelayo zilungele ngakumbi. Beka nje isandla sakho phantsi kwesepha yokuhambisa, iya kukhupha isisombululo sesepha, inciphise ukuthinta, kwaye ikhusele impilo yabantu. Sebenzisa itekhnoloji yale mihla ukwahlula i-COVID-19. Ukuqala ngokuhlamba izandla, isepha yokuhambisa into ngokuzenzekelayo ikhusela abantu kwiintsholongwane
I-SKU: Dispenser yokuSebenza ngokuzenzekelayo iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Izipompo zeBlue Bath tags: Igumbi lokuhlambela lokuhlamba, Isepha le Foam, Inzwa ye-infrared, Uphahla lwamanzi